Barea de Madagascar : Mianto-tena fa tsy hita ny fitondram-panjakana -
AccueilSongandinaBarea de Madagascar : Mianto-tena fa tsy hita ny fitondram-panjakana
Barea de Madagascar : Mianto-tena fa tsy hita ny fitondram-panjakana
Misedra olana indray ny ekipam-pirenena eo amin’ny baolina kitra, Barea de Madagascar, amin’izao fotoana izao.
Araka ny fantatra mantsy, efa tonga eto an-tanindrazana avokoa ireo mpilalao mila ravinahitra any ivelany manatevin-daharana ny Barea de Madagascar, hiatrika ny lalao fifanintsanana isam-bondrona, sady fisokajiana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika (Can). Hihaona amin’i Soudan mantsy i Madagasikara, ny 18 novambra izao. Noho izany, nanomboka ny fanazarantena miaraka ny ekipam-pirenena omaly folakandro, teny amin’ny kianjan’ny Mopera Pedro, Ambohimahitsy.
Raha ny fanazavana, mianto-tena ireo mpilalao mandrafitra ny Barea de Madagascar amin’izao fanomanana ny fihaonana amin’ny ekipam-pirenen’i Soudan amin’ny faran’ny herinandro izao. Nambaran’ny mpanazatra, Nicolas Dupuis, fa tsy ampy mihitsy ny fotoana hanomanana ny Barea saingy, tsy maintsy hatrehana izany ary atao izay faran’ny tratra amin’ny fanazarantena.
Hatreto, tsy hita ny Fitondram-panjakana amin’ny fanohanana sy fanampiana ny ekipa-pirenena. Voninahi-pirenena anefa no harovan’izy ireo amin’ity Can 2019 ity. Eny, fa na efa tafita ary sambany hiatrika izany Can 2019 any Cameroun izany aza ny Barea, tsy maintsy mamita ireo lalao amin’ny fifanintsanana isam-bondrona fisokajiana ka anisan’izany ny fihaonana amin’i Soudan, ny alahady 18 nnovambra izao, sy ny lalao miverina amin’i Senegal. Izany rehetra izany mila fanomanana sy fanohanana ara-bola avokoa saingy, miraviravy tanana ny Fanjakana. Rehefa nahazo fandresena ka tafita hiatrika ny Can 2019 anefa ny Barea, mailaka ny Fitondram-panjakana nandray azy ireo teny an-dapa ary nanolotra lelavola izay tsy fahitan’ireo mpitia fanatanjahantena. Ankehitriny, toa mifanjana indray ireo tompon’andraikitra isan-tokony eo anivon’ny governemanta.
Anisan’ny tena mahatalanjona sy mahagaga ny maro kosa ny fihetsiky ny minisitry ny Fanatanjahantena, izay nilaza fa tsy manam-bola hoenti-manampy ny ekipa nasionaly. Nambarany fa tsy izany ny iraka nampanaovin’ny Fitondrana sy nanendrena azy ho eo amin’ny toerany fa ny fikarakarana sy fahatanterahan’ny fifidianana. Noho izany, tsy misy hiraharahian’ny minisitry ny Fanatanjahantena, Faratiana Eugène Tsihoara, ny fanomanan-tenan’ny Barea. Isika aza anefa tsy nosazian’ny Fifa sy ny Caf mikasika ny olana mitranga teo anivon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) momba ny fifidianana federaly. Noho izany, ny Fanjakana indray izao no manao takalon’aina ny ho avin’ny baolina kitra malagasy sy ny mpilalao, ary ny mpankafy.